किन पढ्ने मानविकी विषय ? |
किन पढ्ने मानविकी विषय ?
प्रकाशित मिति :2018-05-17 06:51:04
कक्षा १० सम्मको पढाइ पूरा गरपछि अबको रोजाइ प्लस टुको हो । प्लस टुमा विषय रोज्ने सुविधा हुन्छ । आफूलाई भविष्यमा जुन क्षेत्रमा काम गर्नुछ सोही अनुसारले विषय छनोट गर्न पाइन्छ ।
प्लस टु कुनै पनि विषयबारे आधारभूत जानकारी गराउने तह हो । यस तहमा हामीले सिकेको जानकारीलाई विश्वविद्यालयमा गएर अझ विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा प्लस टुमा लिइने विषय भविष्यको जग हो भन्न सकिन्छ ।
आज हामी मानविकी विषयबारे केही जानकारी दिँदै छौ ।
प्लस टुमा विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा जस्तै मानविकी पनि संकाय हो । मानविकीलाई कला विज्ञान पनि भनिन्छ । जसलाई अग्रेजीमा आर्टस पनि भनिन्छ । यसभित्र विभिन्न विधा हुन्छन् । अन्य विषयको तुलनामा यस संकायभित्र धेरै विषयहरु रोज्ने सुविधा हुन्छन् ।
समाजमा प्रतिष्ठाको पेशा मानिने पत्रकारिता, वकिल, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थविद्, राजनीतिज्ञ, साहित्यलगायतका थुप्रै विषयहरु मानविकी संकाय अन्तर्गत पर्छन् । प्लस टुपछि बीए, बीएसडब्लु विषय लिई उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ ।
मानविकी विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थी समाजसँग बढी नजिक हुन्छन । प्लस टुमा मानविकी संकाय अन्तर्गत विभिन्न विषयहरु छनोट गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ । जर्नालिजम, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, अंग्रेजी साहित्य, नेपाली साहित्य, जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति लगायतका विषय विद्यार्थीले छनोट गरी अध्ययन गर्न सक्छन् ।
प्रायः मानविकी संकाय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले समाजिकी संघसंस्था र एनजीओ र आइएनजीओमा काम गर्छन् भने केही विद्यार्थीहरु पत्रकारिता र समाजशास्त्र विषय लिई सोही क्षेत्रका भविष्य निर्माण गर्दछन् ।
प्लस टुमा मानविकी संकाय अध्ययन गर्नका लागि एसईईको परीक्षामा १.६ जीपीए ल्याउनुपर्छ । नेपाली, सामाजिक र अंग्रेजी विषयमा डी प्लस आएका विद्यार्थीहरुले मात्र मानविकी संकायमा भर्ना हुन पाउँछन् । जर्नालिजम अध्ययन गर्नका लागि भने गणित विषयमा डी प्लस आएको हुनुपर्छ ।
मानविकी अध्ययनले विद्यार्थीलाई व्यवहारिक बनाउन सहयोग गर्छ र सामाजिकी ज्ञान विद्यार्थीहरुले प्राप्त गर्न सक्छन् । प्लस टुमा मानविकी संकायमा अध्ययन गर्नका लागि कलेज अनुसार फरकफरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ । औसतमा ३५ हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ । यसबाहेक प्रयोगात्मक परीक्षाको छुटै शुल्क लाग्छ ।
मानविकी संकायमा सिद्धान्तिक रुपमा मात्र विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन नगरी प्रयोगात्मक शिक्षामा पनि बढी जोड दिन्छ । मानविकी संकाय अन्तर्गत पढाइ हुनु सामजशास्त्र तथा मनावशास्त्र र जर्नालिजम विषयमा प्रयोगात्मकमा जोड दिन्इछ । त्यसैले विद्यार्थीहरुले मानविकी संकाय रोज्ने गर्दछन् ।